'नकारात्मक सोच बदल्ने कोशिश गर्नेछु'
अन्तर्वार्ता/विचारमंगलवार, श्रावण २५, २०७३
१५ साउनको निर्वाचनबाट चलचित्र निर्देशक समाजको सातौं अध्यक्ष चुनिन सफल सुचित्रा श्रेष्ठ भन्छिन्, “अबको समाज नयाँ र पुराना निर्देशकबीच पुल बन्नेछ।”
अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि कस्तो महसूस भएको छ?
धेरै खुशी छु, केही गर्ने जोश र जाँगर छ। चुनावी प्रक्रियाबाट आएकाले जिम्मेवारी थपिएको महसूस गरेकी छु। चलचित्र भनेको निर्देशकको आँखा हो। चलचित्रको क्याप्टेन नै निर्देशक भएकाले स्वतः मेरो भूमिका पनि बढेको छ।
नेपाली चलचित्र निर्देशनका प्रमुख समस्या के–के हुन्?
पहिलो समस्या त चलचित्र विधालाई हेर्ने दृष्टिकोणमै छ। चलचित्रलाई सरकार र समाज दुवैले नकारात्मक ढंगले हेरेको पाइन्छ। काम नपाएका र नपढेका मान्छे यस क्षेत्रमा लाग्छन् भन्ने गलत बुझाइ छ। चलचित्र त बौद्धिक सिर्जना हो।
चलचित्र विकास बोर्डले केही समयअघि निर्देशकका लागि विवादास्पद आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको थियो। के निर्देशक हुन कुनै मापदण्ड जरुरी छ?
चलचित्र विकास बोर्डले निर्देशकका लागि जारी गरेको आचारसंहिता ठीक छ। चलचित्र पनि प्राज्ञिक क्षेत्र हो। जसले पायो उसले निर्देशक बन्छु भनेर हुँदैन। यसले चलचित्रको गुणस्तरमा असर पार्छ।
तपाईं निर्देशक समाजकै पहिलो महिला अध्यक्ष बन्नुभयो, तर चलचित्र क्षेत्रमा महिला निर्देशक न्यून छन्। कारण के हो?
२०५८ सालमा पहिलो पटक निर्देशन गरेकी म एक्ली महिला निर्देशक थिएँ। त्यसको ७ वर्षपछि अर्की महिला देखिनुभयो। महिला स्वयंमा पनि चलचित्र निर्माणमा जमेर काम गर्न सक्छु भन्ने विश्वास छैन। महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि राम्रो नभएर हो।
अध्यक्षका रुपमा तपाईंका कार्ययोजना के के छन्?
समाजले चलचित्र निर्देशकहरुलाई व्यवस्थित गर्नेछ। चलचित्र र निर्देशनबारे नकारात्मक कुरा हटाउन पहल गर्दै सरकारी तवरबाट समस्या समाधान गर्न दबाब पनि दिनेछ। पुराना र नयाँ पुस्ताका निर्देशकको पुलको काम गर्नेछ।